Mohamed Salah Keena Oo La Wareega......- Heshiiska Ciyaartoy Is-Dhaafsi Ee Ay Real Madrid U Bandhigayso Liverpool Oo La Ogaaday - GOOL24.NET
Mohamed Salah Keena Oo La Wareega……- Heshiiska Ciyaartoy Is-Dhaafsi Ee Ay Real Madrid U Bandhigayso Liverpool Oo La Ogaaday
October 17, 2021 Apdihakem Omer Adam
Warar cusub ayaa sheegaya in kooxda Real Madrid ay qorshaynayso heshiis ciyaaryahano is-dhaafsi oo ay dhigeeda Liverpool kaga soo qaadanayso Mohamed Salah oo xilli ciyaareedkan ku bilawday qaab ciyaareedkiisii ugu cajiibsanaa waayihiisa ciyaareed.
Kooxda ka ciyaarta horyaalka La Liga ayaa ahayd mid la dhacsan Salah oo aan wali xal buuxa laga gaadhin arrimaha mustaqbalkiisa.
Sida uu sheegayo il-wareedka ESPN, Real Madrid ayaa tixgelin karta inay Liverpool ula tagto heshiis ciyaaryahano is-dhaafsi iyada oo siinaysa Eden Hazard iyo lacag isla markaana ka doonaysa Mohamed Salah.
Xiddiga Belgian-ka ah oo mudo dheer Liverpool soo dhibaateeyay markii uu Chelsea u ciyaarayay ayaa xilli ciyaareedkii saddexaad ku qaadanaya Real Madrid balse ilaa haatan fashil buuxa ku ah kooxdaas.
Labadiisii xilli ciyaareed ee ugu horreeyaay ee kooxda ayaa ahaa kuwo ay dhaawacyo dileen halka uu doorkan ahaa mid aan joogto ka ahayn shaxda asaasiga ah isaga oo ilaa haatan aan wax gool ah dhalin mudo siddeed kulan ah.
Tababare Carlo Ancelotti ayaa la sheegayaa inuu ka shaqaynayo qaab ciyaaryahanadii hore ee Blues la isku dhaafsanayo. Waxa ku adkaan doonta Los Blancos inay ku qanciyaan Liverpool inay ka iibiso Salah oo haatan ku jira xiddigaha ugu wanaagsan dunida.
29 sano jirkaas ayaa 10 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan 10 gool kusoo dhaliyay isaga oo shalay markale gool cajiib ah la gaadhay shabaqa Watford.